I-Trend 2018: Amaqiniso angu-3 endlela yokudala ibhodi yemizwa ekhaya futhi uzijabulise - Indlela yokuphila 2022
I-Trend 2018: Amaqiniso angu-3 endlela yokudala ibhodi yemizwa ekhaya futhi uzijabulise
Ugqozi lusizungezile yonke indawo, futhi ngenxa yobuchwepheshe besimanje bedijithali, namuhla ayikho inkinga yokuthwebula izikhathi ezinhle kakhulu empilweni yakho noma lokho okukukhuthazayo, bese udala ibhodi yemizwa evela kulezi zithombe, imicabango kanye nokuvelayo.
I-Moodboard iwukubukeka okusha kwe-"mood board" eyaziwa kakade, eyaba enye yezitayela ngo-2018 ngaphakathi.
Lolu uhlobo lwekholaji yokukhuthaza nokujabula, equkethe kuphela izithombe nemifanekiso futhi efana ne-akhawunti yomuntu siqu ezinkundleni zokuxhumana. Ingadalwa ngendlela yedijithali ku-Photoshop noma ezinye izinhlelo, futhi ngesimo somzimba - unganamathisela imidwebo nezithombe ngendlela eyaziwayo ngqo odongeni.
Uma udala ibhodi yemizwa, zicabange njengochwepheshe okhetha okungcono kakhulu, hhayi njengomqoqi. Ngakho-ke, zama ukwenza isiqiniseko sokuthi izithombe aziveli zibe "olivier", kodwa zixhunywe ngetimu, okusho, uhlelo lombala.
Akunandaba ukuthi ibhodi lakho lemizwa lizoba ngayiphi ifomethi, kunoma yikuphi, kuyinto efiselekayo ukuthi inake izithombe ezibalulekile ezizobe zizungezwe futhi zihambisane nezinye, ezincane.
Lokhu kuqinisa ingqikithi, njengohlobo lomshini we-subconscious, lapho umuntu ebheka ibhodi elinjalo futhi eqala ukubona izithombe ezinkulu - uqala ukubuza imibuzo, futhi athole izimpendulo ezithombeni ezincane.
Indlela engokomzimba yokwakha ibhodi yemizwelo ingase ibonakale iphelelwe yisikhathi, kodwa ngithembe - ifakazelwe phakathi neminyaka futhi iyi-chip yangempela yokuxoxisana ekwakhiweni kwangaphakathi.
Uhlangothi oluthintekayo lwe "mood board" luqukethe izakhi ezisikiwe, ezinamathiselwe noma ezinamathiselwe kulo ngosizo lwamagnetic, izingubo zokugqoka, izinkinobho eziqinisa umlayezo ongokomzwelo wendaba yesikhathi esizayo mayelana nabo.